Maninona ary ahoana no fananganana kaonty Gravatar | Martech Zone
Maninona ary ahoana no fananganana kaonty Gravatar
Asabotsy Jolay 18, 2015 Alarobia, Jolay 22, 2015 Douglas Karr
Iray tokana amin'ny fampitomboana ny fahefana sy ny fanatsarana ny laharan'ny milina fikarohana dia ny fahazoana milaza amin'ny tranokala mifandraika amin'ny tranokalanao, marika, vokatra, serivisy na olonao. Ireo matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe dia mamelabelatra ireo resaka ireo isan'andro. Fantatr'izy ireo fa ny fahazoana ny sain'ny mpanjifa saina amin'ny Internet dia mitondra io fanekena marika io. Miaraka amin'ny fanovana algorithm, dia paikady voalohany ihany koa ny fanatsarana ny anao filaharana teny lakile amin'ny motera fikarohana.
Indraindray, tsy manana fotoana ifampidinika na hanoratana momba ny vokatra izahay fa tsara dia tsara ny feo ka manasa ny matihanina PR izahay mba hanoratra ny mpanjifany Guest post. Ny lahatsoratra dia matetika no ampahany mora indrindra amin'ity fifamofoana ity, ny orinasa dia vonona ny hanome lahatsoratra iray. Nametraka fepetra vitsivitsy ho azy ireo izahay:
Miezaha hihazona ny atiny eo anelanelan'ny teny 500 sy 1,000.
Farito ny olana mahazo ny mpivarotra ary manandrama manome antontan'isa vitsivitsy miaraka amin'ny loharano izay manohana ny toerana.
Omeo fomba fanao tsara indrindra manodidina ny famahana ny olana.
Raha manana vahaolana teknolojia ianao dia omeo ny antsipiriany momba ny fanampiana azy.
Ampidiro pikantsary, kisary, tabilao na - indrindra - horonantsary vahaolana.
Tsy mila fe-potoana farany izahay, fa ampahafantaro anay ny amin'ny fandrosoana.
Misoratra anarana amin'ny Gravatar ary omeo anay ny adiresy mailaka nomen'ny mpanoratra nosoratan'izy ireo.
Ho ampiana ao amin'ny taratasim-panoratanay ny mpanoratra ary afaka mifandray mivantana amin'ny fanarahan-dia. Raha malaza ny lahatsoratra, mety hanao podcast momba ilay lohahevitra mihitsy aza isika.
Ilaina ny fisoratana anarana amin'ny mpanoratra amin'ny Gravatar izy ireo afaka mifehy ny sary aseho amin'ny mombamomba ny mpanoratra. Raha tsy misy izany dia nangatahina tsy tapaka izahay havaozy ny sarin'ny mpanoratra ary tsy te hitantana izany izahay. Gravatar dia serivisy tsotra ary ho tombontsoan'ny mpanoratra indrindra hampiasaina hahafahan'izy ireo manana sary azo fantarina manerana ny tranonkala - tsy amin'ny tranokalanay ihany.
Inona no atao hoe Gravatar?
Avy amin'ny tranonkala Gravatar:
Ny "avatar" dia sary iray maneho anao an-tserasera - sary kely miseho eo akaikin'ny anaranao rehefa mifanakalo amin'ny tranokala ianao. Ny Gravatar dia a Avatar ekena eran'izao tontolo izao. Mampiakatra azy ianao ary mamorona ny mombamomba anao indray mandeha monja, ary avy eo rehefa mandray anjara amin'ny tranokala misy alalana Gravatar ianao dia hanaraka anao avy hatrany ny sary Gravatar anao. Gravatar dia serivisy maimaimpoana ho an'ny tompona tranokala, mpamorona ary mpampiasa. Ampidirina ho azy ao amin'ny kaonty WordPress.com rehetra ary ampiharina sy tohanan'i Automattic.
Fa Maninona Isika no Mampiasa Gravatar?
Matetika ny olona dia manova ny sariny mombamomba azy ao amin'ny tranonkalany sosialy. Mety hanova ny volon'ny volo izy ireo, na koa misy sary matihanina vaovao nalaina. Raha nanoratra lahatsoratra amina famoahana ianao, ahoana ny fomba fanavaozan'izy ireo ny sarinao amin'ny farany sy lehibe indrindra? Ny valiny dia Gravatar.
Ao amin'ny WordPress, ny sary an'ny mpanoratra dia azo avy amin'ny alàlan'ny tady ahitàna ny mailaky ny mpanoratra. Ny adiresy mailaka an'ny mpanoratra dia tsy aseho ampahibemaso velively. Ary ny kaonty Gravatar dia hamela anao hitantana adiresy mailaka marobe ao amin'ilay kaonty, miaraka amina sary marobe.
Tags: mpanoratraprofesora mpanoratraAvatarGravatar
Antony 5 Tsy mahatratra ny quota-ny ny ekipan'ny varotrao
17 Okt 2007 amin'ny 10:59 PM
Raha hitanao na aiza na aiza amin'ny Internet ity Gravatar ity dia izaho!
Oct 18, 2007 amin'ny 4: 20 AM
Tsy mampiasa Gravatar aho fa kosa mampiasa MyAvatar izay plugin ho an'ny WordPress.
Io dia mamela ny zavatra mitovy hitranga fa ny avatar aseho dia hitovy amin'ilay ao amin'ny MyBlogLog.
Manamora zavatra be dia be izany satria ny ankamaroan'ny mpamaky dia tsy handray ny dingana fanampiny hanaparana avatar ho an'ny bloghopping fotsiny. 🙂
Oct 18, 2007 amin'ny 11: 35 AM
Tiako ny gravatars ary faly aho fa notondranan'izy ireo izany. Manantena aho fa hampidirina ao anaty WordPress amin'ny endriny manaraka…
Misy famerenana tsara momba ny gravatars ao http://www.thetechbrief.com/2007/10/12/get-yourself-a-gravatar-while-theyre-still-hot/
Oct 19, 2007 amin'ny 12: 12 AM
Ary izao dia serivisy maimaimpoana tanteraka - ampio avatar sy id email betsaka araka izay tadiavinao 🙂
8 Jan 2008 amin'ny 10:59 PM
Tena namorona kilasy Gravatar aho raha tsindrio ny rohy amin'ny anarako. Miaraka am-pitaka ary miasa toy ny nofy - manana cache miaraka amin'ny daty fahataperan'ilay avatar ihany koa izy - hamonjy amin'ny fotoana fandefasana. Afaka mametaka ny avatar fotsiny eo an-toerana.